ယေရှုက ကျနော်တို့ကို ဘာကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသလဲ?
မေးခွန်း - “ဘာကြောင့် ယေရှုကို ယုံကြည်ရမလဲ? ယေရှု ကျွန်တော်/ကျွန်မကို ဘာကမ်းလှမ်းခဲ့သလဲ?”
ကျနော်တို့ရဲ့အဖြေ (က) - အောက်ပါပြောဆိုချက်တွေဟာ ယေရှု ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိစဉ်တုန်းကပြောခဲ့တာတွေကို သူ့ဖော်ပြချက်အတိုင်း ပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မှောင်မိုက််မှလွတ်မြောက်ရာလမ်း -- “ငါ့ကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည် မှောင်မိုက််၌မနေစေခြင်းငှာ ငါသည် အလင်းဖြစ်လျက် ဤလောကသို့ကြွလာပြီ။”၁
ပြည့်ဝခြင်း၊ အတွင်းစိတ်ဆာငတ်မှု၏နိဂုံး -- “ယေရှုကလည်း ငါ အမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မောရှေသည် ကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အားမပေး။ ခမည်းတော်သည် မှန်သောကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏မုန့်မူကား၊ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍ လောကီသားတို့အား အသက်ကိုပေးသော မုန့်ပေတည်းဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ သခင်၊ ထိုမုန့်ကို အကျွနု်ပ်တို့အား အစဉ်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ငါ့ထံသို့လာသောသူသည် နောက်တစ်ဖန် အဆာအမွတ်မခံရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် နောက်တစ်ဖန် ရေငတ်မခံရ။”၂
ဘဝလမ်းညွှန် -- “တဖန်တုံ ယေရှုက၊ ငါသည ်ဤလောက၏အလင်း ဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောင်မိုက််၌ မသွားမလာ၊ အသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”၃
ကျနော်တို့အပြစ်အတွက် အဖိုးအခ -- “လူသားသည် [ယေရှုသည်] သူတပါးကို စေစားခြင်းငှာမလာ၊ သူတပါးအစေကို ခံခြင်းငှာ၎င်း၊ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူအများကိုရွေးခြင်းငှာ၎င်း၊ ကြွလာသည်…”၄ “အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် လူတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်းကို၎င်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို၎င်း ခံရမည်။ ခံပြီးမှ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည် ဟူသောအကြောင်းများကို တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏။ ထိုအကြောင်းများကို သူတို့နားမလည်သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ကို မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။”၅
ကြွယ်ဝသောအသက်တာ -- “ထို့ကြောင့်တဖန် ယေရှုက၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသည် သိုးဝင်သောတံခါးဝဖြစ်၏။ ငါ့ရှေ့၌ ပေါ်လာသောသူရှိသမျှတို့သည် သူခိုးဓားပြဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏ စကားသံကို သိုးတို့သည် နားမထောင်ကြ၊ ငါသည် တံခါးဝဖြစ်၏။ ငါဖြင့်ဝင်သောသူသည် ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက် ထွက်ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှာသာ လာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့ကို အသက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်ဖြင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ [ကြွယ်ဝစေခြင်းငှာ] လာသတည်း။ ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းလည်း ဖြစ်၏။ ကောင်းသောသိုးထိန်းသည် သိုးတို့အဘို့အလိုငှာ မိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏။”၆
အပြစ်အတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရား -- “ထိုအခါ လက်ခြေသေသောသူတစ်ယောက်ကို လူလေးယောက်တို့သည် ထမ်း၍ အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့် ကိုယ်တော်ရင်းသို့ မချဉ်းကပ်နိုင်သဖြင့် ကိုယ်တော်ရှိရာအပေါ်မှာ အမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှ လူနာနှင့်တကွ အိပ်ရာခုတင်ကို လျော့ချကြ၏။ ယေရှုသည် ထိုသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်၊ လက်ခြေသေသောသူအား၊ ငါ့သား၊ သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ထိုင်သော ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊ ဤသူသည် ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြောရသနည်း။ ဘုရားသခင်မှတပါး အဘယ်သူသည် အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်သနည်းဟု စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ကြ၏။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ထိုသို့ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကို ယေရှုသည် မိမိဉာဏ်အားဖြင့် ချက်ချင်း သိတော်မူလျှင်၊ သင်တို့စိတ်ထဲမှာ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ထင်မှတ်ကြသနည်း။ လက်ခြေသေသောသူအား အဘယ်စကားကို သာ၍ပြောလွယ်သနည်း။ သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟု ပြောလွယ်သလော။ သင်ထလော့၊ ကိုယ်အိပ်ယာကိုဆောင်၍ လှမ်းသွားလော့ဟု ပြောလွယ်သလော။ လူသားသည် [ယေရှုသည်] မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင်သည်ကို သင်တို့သိစေခြင်းငှာ၊ ထလော့။ ကိုယ်အိပ်ယာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့ဟု သင့်အားငါဆိုသည်ဟု လက်ခြေသေသောသူအား မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသူသည်လည်း ချက်ချင်းထ၍ အိပ်ယာကိုဆောင်လျက် လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ထွက်သွား၏။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည် မိန်းမောတွေဝေခြင်းရှိ၍၊ ဤကဲ့သို့ တစ်ခါမျှ မမြင်စဖူးဟုပြောဆို၍ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။”၇
ထာဝရအသက် -- “ခမည်းတော်သည် ငါ့အား ပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည် ငါ့ထံသို့ လာကြလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျှဉ်းမပယ်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုသို့လိုက်ခြင်းငှာ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းငှာ ဆင်းသက်၏။ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကား၊ ငါ့အားပေးသောသူတို့တွင် တစုံတယောက်ကိုမျှ ငါမပျောက်စေရဘဲ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှာ၎င်း၊ သားတော်ကိုကြည့်မြင်၍ ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၎င်း အလိုတော်ရှိ၏။ ငါသည်လည်း နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူတို့ကို ထမြောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”၈
(၁) ရှင်ယောဟန် ၁၂း၄၄-၄၆ (၂) ရှင်ယောဟန် ၆း၃၂-၃၅ (၃) ရှင်ယောဟန် ၈း၁၂ (၄) ရှင်မဿဲ ၂ဝး၂-၂၈ (၅) ရှင်မာကု ၉း၃၁-၃၂ (၆) ရှင်ယောဟန် ၁ဝးရ-၁၁ (၇) ရှင်မာကု ၂း၃-၁၂ (၈) ရှင်ယောဟန် ၆း၃၇-၄၀